TogaHerer: ERAY-CILMI-AFEEDKA AFKEENNA HOOYO
Mar haddii nala baray “Lion roars” IWM. Ma is-weydiisay inaad afkaaga hooyo ku xeeldheeraatid mase jamatay eray-cilmiyeedka afkeenna hooyo ee ah hagaha iyo hagaajiyaha hiddaha iyo sooyaalkeenna badhaxtiran?
Xoolaha waxaa loo qeybiyaa: Dabjoog iyo Duurjoog. Waxaa kaloo loo sii qeybiyaa: Nugul iyo Naygag. Waxaa markale loo sii qeybiyaa: Ari, Adhi, iyo Ishkin. Nugul lo’da ayaa ka mid ah. Naygag geela ayaa ka mid ah. Erayga naygag waa laba eray oo laysku dhababay midbana macno miiggan leeyahay. Erayga qeybtiisa hore, “Nay” waxey tilmaameysaa ama tahay orad oo geelu wuxuu ka mid yahay xoolaha kuwooda ugu oradka badan. Erayga “Gag” wuxuu la macno yahay erayga adeyg oo geelu wuxuu ka mid yahay xoolaha la dhaqda, raacda, kuwooda ugu dulqaadka badan.
Hal garabweyn ah waxey macno ahaan ugu dhawdahay galgaal, laakiinse, waxaa garabweyn inta badan loo adeegsadaa qaalinta weynaatay ee abaahada awrtna ka daahday. Nirig, midda yar ee dhaddig – caksiga qurbac. Hal dhabiil ah – hasha tayada wacan oo dhaqaaleeyuhu uu ugu lexjeclada badan yahay – shandhalka IWM. Waxaa noo caddeyneysaa maahmaahdan guunka ah: “Shan-dhal geel nin leh ma baxsho ninaan laheyna ma qaata”. Hal ilma-diid ah, midda ilmaha marka ey dhasha diidda. Hal habad ah, midda aan haraantin dabadhoonka iyo doobkaba – baarri ah. Hal tooja ah, midda dhibka badan ee haraatida badan marka la maalaya ama la lisaya – cabaadada cadheysan.
Hashu wey foolataa weyna fool-ba’daa ama fool-dhuntaa. Wey xabbururisaa ama xab-jabisaa dabadeedna ilma-keentaa. Foosha iyo dhalmada kaddib madheer (mandheer meelaha qaar)
Lo’da waxaa loo qeybiyaa: Dibi iyo sac – labkeeda iyo dhadiggeeda.
lo’da ayuuna boodaa ama saartaa amase fuula oo rimiyaa.
Sacuna wuu jaleeloodaa oo luga-dagaa. Maqasha lo’da waxaa loo yaqaannaa: weylo kuwa aadka u yaryarna waxaa loo yaqaanna: asharoo. Lo’da qaalmaheeda waxaa loo yaqaannaa: aalo ugubna waxey kala mid tahay xoolaha kale. Sida hashu waa ugub iyo sacu waa ugub. Lo’du wey barqataa oo waa la maalaa laakiinse xaf ayey u badan tahay ee xigta geela ayaa caan ku ah, eeg oo akhri gabayga Cabdullaahi Macalin Axmed – Dhoodaan. Qaalinta lo’da ah wey gorisaa. Saca weyna wuu dheysiyaa oo candho-keenaa sida xoolaha kalaba loogu adeegsada eray-cilmi-taraneedkan.
Ridu wey jaleelootaa oo luga-dagtaa. Ceesaantu – midda yar, wey carisaa. Rida weyna wey dheysisaa. Idaha waxaa loo qeybiyaa : wan iyo lax. Sabeentuna waa laxda yar. Iduhu wey asoollaan; sabeentuna wey kuulisaa marka ey rimayga koowaad tahay, balse laxda weyn wey dheysisaa sida xoolaha kale. Qeybahan aan sare ku xusnay ee xoolaha ah waxaa laysku dhahaa: saddaxda-caana-macaan – geela, ariga iyo lo’da. Erayga maqalna waxaa loo wada adeegsadaa ilmaha ay saddaxdan qeybo-xoolaad dhaleen, waloow badhaadh ama baraar idaha uu u gaar yahay asharoona lo’da. Waxaase xusid mudan eray-cilmiyeedka goobaha xoola lagu xafida. Moora geela ayaa lagu xereeyaa. Xerana lo’da iyo arigaba ayaa wadaagaan (magac-ahaan). Qab waa meesha waxaraha ariga lagu xereeya edagna waa meesha weylaha lagu xereeya. Geela waa la ragaadiyaa marka ey qodax mudda. Eeg gabayga Abwaan Daahir Cali Nuur. Arigase waa la faraa, fadhaa, ama la qodxiyaa sida gobollada qaarkood looga yaqaan.
Geenyo waxaa loo yaqaannaa faraska midkiisa dhaddig. Gammaaku ama gammaantu wey ama wuu dananaa oo lama oran karaya wey ama wuu yeerayaa ama ciyayaa. Balse dammeerku wuu ciyaa. Eeg oo akhri beydkan – “Muxuu cay dameer igaga dhimi, wayska ciyayaaye”. Waxaan filayaa inuu tiriyey abwaan Cali Oday mase huba ee hadduu abwaan kale tiriyey waan ka cudurdaaranayaa.
Abwaan Maxamed Cabdiqaadir Daa’uud (Stanza)
Posted by togaherer at 05:52